कैलालीमा तरकारी बिक्रीको थलो बन्दै हाटबजार - नेपालबहस
कैलालीमा तरकारी बिक्रीको थलो बन्दै हाटबजार
| १०:५४:५६ मा प्रकाशित
३० माघ,टीकापुर । कैलालीको टीकापुरमा सञ्चालित तरकारी हाटबजारमा दैनिक ३०० भन्दा बढी किसान स्थानीयस्तरमा उत्पादित तरकारी बिक्रीका लागि आउने गरेका छन् । हाटबजारमा ताजा र स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको अग्यानिक तरकारी पाइने भएपछि उपभोक्ताको भीड लाग्ने गरेको छ । हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्न टीकापुर नगरपालिकाले ब्लक नं ११ मा तरकारी राख्ने सेड निर्माण गरेको छ ।
टीकापुर–१ वनगाउँ दक्षिणपुरुवाकी जुग्रीदेवी चौधरीले चार कठ्ठा जग्गामा तरकारी खेती गरेमा वर्षभरि हाटबजारमा तरकारी बिक्री गरेर गुजारा चलाउन सकिने बताएकी छिन् । हाटबजारका लागि भनेर कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरले एउटा र टीकापुर नगरपालिकाले तीन गरी चारवटा सेड निर्माण गरिएको छ । तरकारी बिक्री गर्ने किसान बढ्दै गएपछि रु ४५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएका सेड व्यवस्थित बनाउने काममा टीकापुर नगरपालिका जुटेको छ । ज्ञानी कुला फाटेर बनेको बीच भागमा सेड बनाएर स्थायी कृषि हाटबजारको योजना नगरपालिकाले बनाएको हो ।
हाटबजार मङ्गलबार र शुक्रबार गरी हप्ताको दुई दिन लाग्छ । दुई सय ५० देखि ३०० किसान र व्यापारी तरकारी, माछा र नास्ताका पसल त्यहाँ आउने गरेका छन् । हाटबजारमा व्यवसाय गरेवापत रु १० देखि ५० शुल्क तिर्नुपर्छ । तरकारी बिक्री गर्नेले रु १० देखि २० र माछा र होटलले रु ५० शुल्क तिर्नुपर्छ ।
टीकापुर नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख तुलसी सुवेदीले हाटबजारस्थल व्यवस्थित गर्न माटो पटानी गर्न थालिएको बताएका छन् । उनले ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरले अर्को तरकारी बिक्री गर्ने सेड निर्माण गरिदिने बताएका छन् । दैनिक सयौँ उपभोक्ताको खरिद केन्द्रका रूपमा तरकारी हाटबजारको विकास हुँदैछ । हाटबजारमा स्थानीय कृषकले आफ्नो उत्पादन हाटबजारमा बिक्री गर्न ल्याउने गरेका छन् । यो हाटबजारबाहेक जमरापारि बुधबार र शनिबार पनि टीकापुरमा हाटबजार लाग्ने गरेको छ । हाटबजारलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएर ट्रस निर्माण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले बताएका छन् ।
नेकपा विभाजनः अध्यादेश ल्याउने कि संसदमै सामाना गर्ने ? ५० मिनेट पहिले
आइपिओ नतिजा हेर्न सिडिएससीले ल्यायो नयाँ वेबसाइट ५३ मिनेट पहिले
ट्याक्टर अनियन्त्रित हुँदा चालकको मृत्यु ५ दिन पहिले
अब ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : नेता डा. कोइराला ४ दिन पहिले
प्रचण्ड-माधव पक्षको जिल्ला नेतृत्व चयन ५ दिन पहिले
प्रचण्ड–माधव समूह : ओलीविरुद्धको कारबाही अनुमोदन गर्दै ४ हप्ता पहिले
देउवा –राजदूत भेटघाट १ दिन पहिले
धितोपत्र बोर्डले आईपीओ पाइपलाइनको लिस्टबाट हटायो यी ६ कम्पनीको नाम २ हप्ता पहिले
सांसद समेत नरहने गरी सरिता गिरी समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित ८ महिना पहिले
काठमाडौंमा निषेधाज्ञापछि नागढुंगामा ‘ट्रकजाम’ ६ महिना पहिले
काङ्ग्रेस सभापति देउवा र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता १ वर्ष पहिले